Sideen ku ogaadaa in moobilkaygu lacag la’aan yahay? Ogow haddii ay tahay inaad sii deyso iyo in kale | Androidsis
Pablo Aparicio | | Khiyaamada Android, Tababarada
¿Sida loo ogaado haddii moobilkaygu lacag la’aan yahay? Haysashada taleefan bilaash ah waxay noo ogolaaneysaa inaan u awoodno inaan ula adeegsanno hawl wade kasta, laakiin mar walba ma awoodi karno inaan iska bixinno qiimaha taleefanka bilaashka ah annaga oo aan lahayn nooc maalgelin ah. Wax caadi ah, inkasta oo wax kayar iyo wax kayar la qabanayo, ayaa ah in taleefan lagala soo baxo qof kasta oo ka shaqeeya, taas oo naga dhigeysa inaan helno nolol joogto ah mana awoodi doonno inaan taleefanka kula adeegsanno hawlwadeen kale ... haddii aan sii dayno mooyee. Laakiin sideen ku ogaan karnaa inuu moobilkeennu lacag la’aan yahay iyo in kale?
Qoraalkan waxaan isku dayi doonaa inaan xallino dhammaan shakigaaga, waxaan ka bilaabaynaa inaan kuu sheegno waxa ay tahay inaad sameyso si aad u ogaato haddii aad ku isticmaali karto mobilkaaga hawl wadeen ka duwan kan ku siiyay. Haddii aadan awoodin, annaguna waan ku bari doonnaa sida loo sii daayo (si gaar ah, si gaar ah ayaan kuu sheegayaa) iyo haddii aan waayi lahayn dammaanadda xaqiiqda ah inaan sii deynay awgood.
1 Sideen ku ogaan karaa in moobilkaygu lacag la’aan yahay?
2 Moobilka mala furi karaa bilaash?
3 Furitaanka mobilka Movistar
4 Furo mobilka Vodafone
5 Ka fur mobilka Orange
6 Sideed uga furaysaa mobilada IMEI?
7 Ma dammaanad-qaadkii furitaanka moobilka ayaa lumay?
Sideen ku ogaan karaa in moobilkaygu lacag la’aan yahay?
Haddii aan rabno inaan ogaano sida loo ogaado in moobilkaygu lacag la’aan yahay ama waxaan kaliya ugu isticmaali karnaa hawlwadeenka aan ka helno, waxaan haynaa xulashooyinkaan:
Habka ugu fudud ee lagu ogaan karo in moobilkeennu lacag la’aan yahay iyo in kale, in la dhigo a Kaarka SIM ka hawl gala shirkad kale kaas oo aad na siisay mobilka. Haddii mobiilku shaqeeyo, taleefankeennu waa lacag la’aan. Haddii ay shaqeyn weydo oo aan hubno in kaarka SIM-ga uu shaqeynayo, moobilkeennu bilaash ma ahan.
Android bilaash ah
Waxaa jira qaab kale oo kale, oo ah adoo adeegsanaya sumadda astaanta u gaarka ah si loo ogaado. Tusaalooyinka qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee adeegsada Android, waxaad leedahay waxyaabaha soo socda:
Lambarka Samsung ee aan haysanno waa: * # 7465625 #
Haddii ikhtiyaarka koowaad ayaa soo baxa “OFF”, Telefoonkeennu waa lacag la’aan. Hadday tagto "ON", taleefankeennu bilaash ma aha.
Koodhka lagu furayo liiska qarsoodiga ah ee taleefanka waa: * # * # 7378423 # * # *
Shaashad ayaa soo muuqan doonta iyada oo xulashooyin dhowr ah oo aan ka soo xulaneyno "Macluumaadka adeegga" ka dibna "Qaabeynta"
Aan aadno dhamaadka, halkaas oo qaybta “Xaaladda xididka”. Hadday “Haa” leedahay, waa la sii daayaa. "Maya" micnaheedu waa maya.
Aynu aadno Settings / Ku saabsan telefoonka /Macluumaadka Barnaamijka.
Haddii nooca ku jira "Nooca Software" uu ku dhammaado "-EUR-XX”Taasi waa lacag la’aan.
Haddii waxa aad rabto ay tahay sida loo ogaado haddii moobilkaygu lacag la’aan yahay oo uu ka yimid astaanta Huawei, lambarka taleefanka Huawei waa: * # * # 2846579 # * # *
Waxaan galaangal u leenahay Mashruuca Mashruuca / Dejinta Shabakada /SIM Card qufulka weydiinta gobolka.
HADDII ay ku qoran tahay «Sim card quful state NW_LOCKED»Taasi ma ahan bilaash.
Moobilka mala furi karaa bilaash?
Sí. Sida aan hadhow sharrax ka bixinno, haddii moobiilkeennu uusan sii waaraynin, waxaan wici karnaa sarkaalka waxayna na siinayaan koodhka furaha bilaashka ah iyagoon ka hor imaanaynin nooc kasta oo iska caabin ah (runtiina, Movistar wuxuu ku sameeyaa kuna sii joogitaan la'aan). Xaaladda ugu xun, waa inaan sameyno wax yar oo loo yaqaan 'paripé' oo aan u sheegno in taleefanka lagu isticmaalayo kaarka lacag bixinta ama wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Waxay kaloo noqon kartaa inay iskudayaan inay noo iibiyaan nooc qandaraas ah, laakiin tani waa wax ay sameeyaan markasta oo aan wacno ama wacno shirkad noocan oo kale ah waana inaan ku adkaysano oo keliya in waxa ay isku dayayaan inay naga iibiyaan aysan danaynayn.
Haddii waxa kor ku xusan aysan ikhtiyaar ahayn, waxaan isku dayi karnaa codsiyo sida kan aad hoosta ku haysato. Kuwaas codsiyada Iyagu ma shaqeeyaan mucjisooyin, laakiin waxay u muuqataa inay ka shaqeynayaan mid ka mid ah labadii xaaladoodba, sidaa darteed waxba nagama lumin isku dayga. Muxuu codsigan sameeyaa wuxuu na siinayaa lambar furitaan ah oo aan tijaabin doonno si aan u aragno inuu shaqeynayo iyo in kale. Haddii ay shaqeyn weydo, waxaan had iyo jeer isku dayi karnaa habka aan mar dambe ku bixiyo.
Furitaanka mobilka Movistar
Sida aan ka aqrinay bogga taageerada ee Movistar, hawl wadeenka buluuga ah «Waa u bilaash dhammaan macaamiishooda Movistar-keeda boosteejooyinka moobiilka ee xambaarsan SIMLOCK. Haddana sidoo kale macaamilka oo leh joogitaan (oo la xidhiidha xaruntooda) ». Haddii aan runta u sheego, tan dambe ayaa iga yaabisay oo iga dhigaysa inaan dib u eego waxa ku qoran qoraalkan. Si loo furo taleefanka Movistar waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan wacnaa 1004 oo waxaan codsaneynaa furaha furaha.
Markay na weydiiyaan IMEI-ka terminal-ka, si fudud ayaynu u siinnaa iyaga. Mashruucan waxaad ku haysaa macluumaad sharxaya sida loo helo IMEI-ka taleefanka.
Ugu dambeyntiina, waxaan galnaa koodhkii ay na siiyeen. Sida lagu sharraxay boggooda, koodhku waa la tijaabin karaa illaa 10 jeer iyada oo aan laga horjoogsan qalabka. Kadib 10 isku day, terminal-ka ayaa sudhan.
Furo mobilka Vodafone
Vodafone Waxay sidoo kale sii deysaa taleefannada gacanta si bilaash ah laakiin, si ka duwan Movistar, waxay sii deyn doontaa oo keliya taleefannada gacanta ee aan waligood ku sii jiri doonin. Si aad u codsato furaha furaha ee terminalka Vodafone, waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan ka helnaa adeegga My Vodafone boggeeda internetka ama si toos ah www.vodafone.es/mivodafone.
Adeegga gudahiisa, waa inaan doorannaa khadka taleefanka ee aan dooneyno inaan sii deyno.
Guji tabta Taleefankayga gacanta Iyo haa oo aan dooranno Taleefankayga gacanta.
Qeybta hoose ee bogga waa ikhtiyaarka lagu furo mobilada. Qeybtaan, waxaan galnaa IMEI iyo cinwaan emayl ah oo aan kuheleyno lambarka. Muddo 48 saacadood gudahood ah waxay noo soo diri doonaan nambarka furitaanka iyo tilmaamaha ku qoran taleefanka gacanta.
Waxaan galnaa koodhka waanan fureynaa.
Ka fur mobilka Orange
Sidee aanan hubin haddii Orange si bilaash ah ugu sii daa mobilka, waxaan dhihi doonaa kaliya inay leeyihiin bog la heli karo (la heli HALKAN) si aad u codsato furitaanka xarunta. Waxaan sidoo kale wici karnaa 1470 (shaqsiyaad) ama 1471 (shirkado)) oo weydii lambarka furaha.
Sideed uga furaysaa mobilada IMEI?
Fur mobiil IMEI Had iyo jeer waa isku mid, iyada oo aan loo eegin nooca qalabkeenu yahay. Caqli ahaan, talaabada ugu horeysa waxay noqon doontaa in la ogaado waxa IMEI ee taleefanka aan dooneyno inaan furno iyo tani waa wax aan ku qaban karno siyaabo kala duwan:
Qaabka ay ugu shaqeyn doonto mobilo kasta waana taas sababta aan u iri tan koowaad waa tan 06 code. Si tan loo sameeyo, waxaan raaci doonaa talaabooyinkan:
Waxaan fureynaa codsiga Telefoonka.
Haddii aynaan toos u helin, waxaan garaacnaa ikhtiyaarka na geyn doona Keyboard-ka, waxaan ku qoreynaa # # 06 #. Lambarka IMEI ayaa ka soo muuqan doona shaashadda.
Si aan uga baxno, waxaan taabanaynaa OK, Aqbal ama qoraalka aan ku dhejineyno moodeelkeenna moobiilka.
Laga soo bilaabo dejinta telefoonka. Hab kale oo lagu helo lambarka IMEI waa adoo ka raadinaya goobaha taleefanka, qeybta macluumaadka halkaas oo aan ku arki doonno nooca Android-ka iyo xog kale oo badan oo ka socota bartayada.
Raadinta sanduuqa. Hab kale oo sahlan oo lagu ogaan karo IMEI-ka taleefankayagu waa adoo fiirinaya sanduuqa. Had iyo jeer waxay ku taal dhabarka, halka aaladda aaladda ay tahay, in kasta oo laga yaabo inaan leenahay taleefan aan sanduuqkiisu ku jirin macluumaadka noocan ah.
Hadda oo aan ognahay waxa IMEI-ka ee terminaalkeennu yahay, waxaan haysannaa fursado dhowr ah, laakiin 2 ayaa ah kuwa ugu isticmaalka badan uguna waxtarka badan:
Waxaad awoodi kartaa fur moobil linkiga aan hadda kaaga tagnay
Haddii moobiilkeennu aanu sii waaraynin, waxa ugu fiican ayaa ah wac shaqaalaha oo weydiiso lambarka si loo sii daayo. Tani waa wax walaalkay sameeyay usbuucyo ka hor, xaaladdan oo kale wuxuu ku sameeyay moobil 2008. Waxaan u sheegeynaa hawlwadeenka nooca mobilada aan haysano iyo IMEI-keeda ilbiriqsiyo gudahoodna waxay noo sheegi doonaan furaha furaha iyo tilmaamaha lagu soo bandhigayo waa
Haddii aan ka codsan karin lambarka ka shaqeeya, Androidsis waxay la shaqaysaa DhakhtarkaSIM inay ku siiso adeeg dhakhso leh oo la isku halleyn karo oo aad ficil ahaan uga furan karto taleefanka gacanta oo dhan. Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa:
Gali degelkan moobil bilaash ah
Halkii aan ugu sheegi lahayn hawlwadeenka IMEI, waxaan u sheegi doonnaa DoctorSIM.
Waxaan ka shaqeyneynaa oo aan bixinnaa adeegga furitaanka ee boggaaga.
Waxaan sugeynaa inaan helno koodhka.
Waxaan taleefankayaga ku dhejineynaa kaarka SIM ka howl gala mid kale
Ugu dambeyntii, waxaan galnaa koodhka furaha oo aqbalnaa.
Horaad u baratay sida loo ogaado in moobilkaygu lacag la’aan yahay iyo sidoo kale, haddii ay ku xiran tahay shirkaddaada, waxaad sidoo kale aragtay sida loogu sii daayo gabi ahaanba bilaash ama adeegsiga adeeg saddexaad.
Ma dammaanad-qaadkii furitaanka moobilka ayaa lumay?
Furitaanka taleefanka gacanta si aad ula isticmaasho shirkad kale, ma sharci baa mise waa sharci darro?
Arrinta dammaanad qaadku had iyo jeer waa khiyaano. Haddii aan leenahay mobiil shirkad ku xiran, waxaan ku sii deyn karnaa oo keliya laba ikhtiyaar: markaan weli sii joogi doonno ama aan mar dambe haysan. Haddii aynaan sii waaraynin, hawlwadeenku wuxuu ku qasban yahay inuu na siiyo nambarka furaha bilaash, sidaas darteed dammaanad kama waayi doonno hoos fikrad kasta. Intaa waxaa dheer, haddii aynaan sii haynin muddo xileedka oo ay ahayd 24 bilood, mar dambe ma heli doonno muddo damaanad ah.
Dhibaatadu waxay imaan kartaa haddii aan sii deyno moobil wali ku sii jiraya joogto. Hawlwadeenku ma jeclaan doono inuu ogaado inaan sii deynay taleefankiisa gacanta si uu ula isticmaalo shirkad kale, taas oo runti taas u sii deynaysa, sax? Sharci ahaan, furashada moobiilku ma ahan sida oo kale Xidid ama beddelo ROM-ka, taasi waa, annagu ma samaynayno wax-ka-beddel software ah oo wax u dhimaya sharafta, sidaas darteed waa in la ilaaliyo damaanadda. Dabcan, sida caadiga ah waa in loo geeyo hawlwadeenka si uu u dayactiro, waxaa ugu wanaagsan in aan la dhaho wax aan sii deynay haddii aysan na weydiinin, haddii kale qaadan, bilaabaan habraacyada si ay u fuliyaan dayactirka oo aan sugno si aan u xallino dhibaatadeena.
Miyaad horayba u ogaatay in moobilkaagu lacag la’aan yahay oo aad ula isticmaali karto hawl wade kale? Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo ogaado in moobaylku lacag la’aan yahay ama maya, noo dhaaf faallo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo ogaado haddii moobilkaygu lacag la’aan yahay
Isku xigxiga kama shaqeeyaan Samsung
Jawaab Nacho Balaguera C.
Waan ka xumahay, laakiin SHARCIGA (gudaha Isbaanishka) dhammaan taleefannada gacanta ee ay ka shaqeeyaan iibiyayaashu waa inaad timaaddaa BILAASH IYO XAALADDA AY XIRAN YAHAY, siideyntoodu BILAASH. Taasi ilaa iyo hada ma aysan sameynin oo qaarkood waxay rabaan inay bilada saaraan inaan fiicanahay waa wax kale, laakiin hawl wadeenada sida Galician R ayaa had iyo jeer ku iibiya bilaash iyagoo raacaya sharciga hadda jira.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan, ka raadi FACUA mashiinka raadinta ee aad jeceshahay wayna kuu sharxi doonaan sida howshu tahay.
Mirel nin dijo
Ka taxaddar, Bootloader-ku wax shaqo ah kuma lahan in la sii daayo, xididkiisuna ma sii daayo. Sidoo kale beddel romka (haddii si xun loo beddelay waxaad lumin kartaa IMEI-KA) Waxaa kaliya sii deynaya shirkadda x imei ama sanduuqa sixirka
Jawaab Mirel Man
isku xigxiga samsung waa Muuuuuuuuuuuyy jir, tan waxaa kaliya loo isticmaalay taleefoonada 2005 ilaa kadib, isku xigxiga kama shaqeynayo xitaa Galaxy S1
Jawaab Ronald Leiva (Motursa)
Aad u fiican, waa run, hadda waxaa jira sharci hadda jira oo waajibinaya in la iibiyo taleefannada gacanta ee la sii daayay laakiin kuwii la iibiyey sharcigaas ka hor sidaas maahan, oo lambarku aniga ayuu ii shaqeeyaa waxaanan helayaa liiska la sharraxay iyo shirkadaha haddii aad iibiso ma keenayo dukumiinti sida moobaylka adigaa iska leh, looma sii daayo khatarta ah in la xado darteed
Waa maxay taxanaha saxda ah ee Samsung ee S5 ah ??? Kii la daabaco aniga waxba iima tarayo
Ku jawaab Yolanda
Marka waan ogahay ama maahan waxay halkaan kuugu sheegayaan maxaa yeelay markaad aragto tan oo aad aqriso faallooyinka way ku xallin doonaan maxaa yeelay qaar waxay dhahaan anigu sax maahan isla boggaasna waxay kuugu sheegayaan haddii lagaa xoreeyay iyo inkale, waxay qeexayaan inay ogaadaan in inaad aaminto ama aadan fadlan
Ku jawaab Moy
Sababtoo ah waxaad ka dhigi kartaa sim shirkad kale
Jawaab Sergi Sr Android
Haye, Samsung code ma shaqeynayo ma jirto wado kale oo lagu ogaan karo haddii la sii daayay
Ku jawaab Yazmin
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa inaan ogaado haddii taleefanka gacanta ee LG VS810PP la sii dayn karo si uu ula isticmaalo shirkadda Telcel
oo hadday ku tidhaahdo Huawei 'SIM-ka wuu furan yahay, fadlan taas la ogeysii! » ?? maxaa yeelay ma wici karo mana heli karo, laakiin haddii aan isticmaalo 4g
Ma ogtahay in App-ka uu dhaafey 5.000 milyan oo soo dejin ah?
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee cusub ee Android [July 2017]